Kunena Team nahazoan-dalana
Kunena Forum - Team nahazoan-dalana
Kunena® Forum misokatra ny loharanom-baovao tetikasa izay mitaky ny fanoloran-tena sy ny fampiasam-bola amin'ny fotoana manokana avy amin'ny mpandray anjara isan-karazany. Izany dikan efa ho tanteraka noho ny manaraka izao mpandray anjara :
Forum mandanjalanja sy ny Testing
Ny Kunena Team Te-hisaotra ny fiaraha-monina noho ny fanampiana sy ny fanohanana. Koa izahay mankasitraka ny asa mafy ny olona rehetra izay manana nadika Kunena ho fiteny hafa maro. Ankoatra izany dia te-hisaotra maro ny mpikambana ao www.kunena.org, Taloha sy ankehitriny, izay manana nandray anjara ary nanampy manao izany kokoa milamina sy bugfree dikan.
Ny fiverenana any amin ny Forum kitiho eto
Fotoana mamorona pejy: 0.097 segondra